Chọpụta ebe foto mbụ si Foto | Esi m mac
Chọpụta ebe foto izizi sitere na ngwa Foto dị
Ọ bụla Mac ọrụ maara ngwa Photos na ndị ọzọ ma ọ bụ na-erughị omimi. Isi ọrụ nke ngwa bụ iji dozie foto agbakwunyere na ngwa ahụ. Isi ụkpụrụ maka inye ha iwu bụ ụbọchị okike, ọ bụrụ na achọtara nke a na data EXIF ​​nke ihe oyiyi ahụ. Site na usoro izizi anyị, anyị nwere ike idezi foto ahụ na mmezigharị zuru ezu, belụsọ ma ị bụ ọkachamara ọkaibe. Anyị nwere ike ịme ụdị ọba dị iche iche ma ọ bụ kesaa foto na netwọkụ mmekọrịta.
Oge ụfọdụ anyị chọrọ otu foto ma ọ bụ karịa. Maka nke a, mmemme ahụ nwere nhọrọ iji bupụ ihe onyonyo ahụ, mana ọ gụnyere ịchọta ọrụ ahụ na ịgbaso usoro ole na ole. Mana enwere nhọrọ ngwa ngwa ma dịkwa mfe.
Foto anyị niile dị na Finder, anyị kwesịrị ịma ebe ha nọ. A na-achịkọta foto ahụ n'ọbá akwụkwọ, anyị nwere ike ịnwe otu ma ọ bụ ọtụtụ ma anyị nwere ike ịnwe ọtụtụ dị ka enyi Pedro gwara anyị. Iji chọta ha: Anyị na-enweta ndị Onye choro na anyị na-emeghe nchekwa oyiyi nke onye ọrụ anyị. Nke a dị na: Macintosh HD> Ndị ọrụ> (Usernye ị chọrọ ịkpọ)> onyonyo.
Anyị ga-ahụ ụlọ ọba akwụkwọ. Ndị a bụ akara ngosi nwere otu ụdị eserese na-achọpụta ngwa App. Pịa aka nri na ọba akwụkwọ anyị chọrọ wepu foto na. N'ime nhọrọ mbụ, anyị na-ahụ: «Gosi ngwugwu ọdịnaya» ma chọta ebe nchekwa ndị Nna-ukwu
Site na ịnweta anyị nwere ike ịchọgharị foto ndị izizi site na Onye nchọta. N'ezie, njirisi ndị Apple họọrọ n'ime ọbá akwụkwọ ahụ sitere na nke kachasị na nke kachasị mma. Ya mere, nke mbụ ga-abụ afọ, na-agagharị n'ọnwa na nọmba ọnụọgụ abụọ, ụbọchị nke ọnwa na n'ikpeazụ oge gosipụtara n'ụdị a: «Afọ ọnwa ụbọchị - hour nkeji nke abụọ». Site mgbe ahụ gawa, ị nwere ike mepee foto ahụ ma detuo ya na ndọtị ọzọ iji rụọ ọrụ na ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Chọpụta ebe foto izizi sitere na ngwa Foto dị
Gini mere imeghe Foto, chọta foto ma dọrọ ya ruo otu anyị chọrọ?
Seiko na-erere elekere akụkọ ifo nke Steve Jobs yi na otu n'ime foto ya kachasị mma